खेलकुद Archives - Khula Patra
फुङलिङ मेयरकप भलिबलको उपाधि सिदिङ्वालाई
ताप्लेजुङ । फुङ्लिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सिदिङ्वा गाउँपालिकाले जितेको छ । सिरिजंघा गाउँपालिकालाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्दै सिदिङ्वा विजेता बनेको हो । सिदिङ्वाले नगद २ लाख ५० हजार १ सय रुपैंयाका साथ रनिङ कप,मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ । उपबिजेता सिरिजंघाले नगद ...
पपुवा न्युगिनीविरुद्ध देवको आकर्षक अर्धशतक
काठमाडौं । युवा ब्याट्सम्यान देव खानाले राष्ट्रिय टिममा पहिलो अर्धशतक बनाएका छन् । टियू मैदानमा जारी एकदिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनीविरुद्ध देवले राष्ट्रिय टिममा करिअरकै पहिलो अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। २४औं ओभरको अन्तिम बेलमा नोर्मन भानुआलाई छक्का प्रहार गर्दै देवले अर्धशत बनाएका...
पपुवा न्युगिनीविरुद्ध नेपालको २ विकेटको संघर्षपूर्ण जित
काठमाडौं । आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको तेस्रो सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। युएईमा जारी नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनीबीचको सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई २ विकेटले हरायो । बुधबार सारजाहमा भएको खेलमा २०५ रनको लक्ष्य नेपालले ४ बल बाँकी छँदा ८ विकेट गुमाउँदै भेट्टायो।...
खेल क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन आवस्यक भएको मन्त्री हाङ्गामको जोड
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामले खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवस्यक भएको बताएका छन् । मानव जीवनमा खेलकुदको महत्व हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित क्षेत्रले ध्यान दिन नसक्दा नेपालको खेल क्षेत्रमा अपेक्षा गरे अनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए । मंगलबार विराटन...
भारतसँग ७-० ले हार्यो नेपाल
काठमाडौं । साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मंगलबार भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक भारतसँग ७-० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । भारतले पहिलो हाफमा ३ र दोस्रो हाफमा थप ४ गोल गरेको थियो । जितसँगै भारतले पहिलो खेलमा महत्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ । नेपालले अब बिहीबार बंगलादेश...
साफ यू-१८ च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारत भिड्देै
काठमाडौं । भारतमा मंगलबारदेखि सुरु हुने साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसिपकाे उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग खेल्देै छ। नेपाल र भारतबीचको खेल बेलुका ७:१५ मा सुरु हुनेछ । नेपाल भारतलाई हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुआत गर्न चाहन्छ । तर, उपाधि दाबेदार भारतविरुद्ध जित निकाल्न नेपाललाई सहज ...
झापा गोल्डकपको उपाधि चौथो पटक आर्मीलाई
झापा । विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले चौथो पटक झापा गोल्डकपको उपाधि जितेको छ। सोमबार बिर्तामोडस्थित डोमलाल राजवंशी फुटबल मैदानमा सम्पन्न खेलमा आर्मीले झापा–११ लाई २–१ ले हराउँदै उपाधि जितेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन टेकबहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गरे। यता विमल घर्ती मगरले एक...
युनाइटेडले टोटेनहमलाई हरायो: रोनाल्डोको ह्याट्रिक
एजेन्सी, फागुन २९: क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा टोटेनहम हट्सपरलाई ३-२ ले पराजित गरेको छ । युनाइटेडको घरेलु मैदानमा टोटेनहमले दुई पटक बराबरी गोल फर्काएपनि रोनाल्डोले ह्याट्रिक पूरा गर्दै जित सुनिश्चित गरे । टोटेनहमका लागि ...
रुसका सबै क्लब र राष्ट्रिय टोलीमाथि फिफाको प्रतिबन्ध
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र युरोपेली फुटबल नियामक यूईएफएले रुसका सबै क्लब र राष्ट्रिय फुटबल टोलीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विषयलाई लिएर फुटबल नियामकले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। नियामकहरुले अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि यो प...
क्यानले फेरि सेभेन स्पोर्टससँग मिलेर टी-२० लिग गर्ने, यस्ता छन् साधारणसभाका निर्णय
नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले भारतको सेभेन स्पोर्टससँग मिलेर टी-२० लिग आयोजना गर्ने भएको छ। धनगढीमा भएको क्यानको वार्षिक साधारणसभाले टी-२० लिग सञ्चालन गर्ने लगायत विभिन्न निर्णय गरेको हो। यसअघि सेभेन स्पोर्टससँग नेपाल प्रिमियर लिग आयोजनाको सम्झौता भएको थियो। तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्...
मच्छिन्द्र र ब्लुस्टार बीचको खेल दशरथ रंगशालामा
काठमाडौं । माघ २७ एएफसी कप छनोटअन्तर्गत मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र श्रीलंकाको ब्लुस्टारबीचको खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने भएको छ । खेल चैत २२ गते साँझ ५ बजेदेखि हुने अखिल नेपाल फुटबल सङघ (एन्फा)ले जनाएको छ । सो खेलमा ब्लुस्टारलाई पराजित गरेमा मच्छिन्द्रले दोस्रो चरणमा भारतको एटीके मोहन ब...
नेकोसले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई सम्मान गर्ने
काठमाडौं । नेपाल खेलकुद महासंघ (नेकोस) ले एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियन नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ । फागुन ७ नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय भएको नेकोसका संयोजक कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । नेकोसले वर्षभरिको प्रदर्शनका आधारमा खेलका सबै विधामा उत्कृष्ट हुने ...
घम्साघम्सीपूर्ण खेलमा मोरिससविरुद्ध नेपालको जित
काठमाडौँ । मोरिससविरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि नेपालले जित निकालेको छ। खेलको पहिलो हाफमै १–० गोलको अग्रता बनाएको नेपलाले १–० कै जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले गोल गरे। रंगशालामा आजको खेल सौहार्दपूर्ण भने रहेन। खेल मैत्रीपूर्ण भए पनि...
नेपाली फुटबलका आशा: जसले १५ वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरे
काठमाडौं । १४ वर्षको कलिलै उमेरमा राष्ट्रिय टिममा पर्न सफलता पाएका विमल घर्तीमगरले १५ औँ बसन्तमा हिँडिरहँदा अर्को सफलता हात पारे। सानैमा अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेपछि एकाएक चर्चा चुलियो विमलको। १५ वर्षको उमेरमा नै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने सफलता कमै मात्र खेलाडीलाई मिलेको छ। हुन त यसअघि विमल ग...
१२ वर्षीया बालिका, जसले डिजाइन गरिन् स्कटल्याण्डको जर्सी
काठमाडौँ । अहिले आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत अहिले पहिलो चरणका खेल चलिरहेका छन्। आठ मुलुकबीच चलिरहेको पहिलो चरणबाट चार मुलुक दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। पहिलो चरणको समूह बीमा रहेको स्कटल्याण्डले बंगलादेश र पीएनजीलाई हराउँदै दोस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाइसकेको छ। माथिल्लो चरणमा...
काठमाडौँ । साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदैछ । माल्दिभ्समा भएको खेलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली आज बिहान सवा ९ बजे नेपाल आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ । मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले केही दिनपछि मात्रै नेपाल फर्कने...
चहल र म्याक्सवेल चम्किँदा बैंगलोरको जित
काठमाडौँ । युजवेन्द्र चहल र ग्लेल म्याक्सवेल चम्किँदा इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को बुधबार राति सम्पन्न खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले जित निकालेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा सम्पन्न खेलमा आरसीबीले राजस्थान रोयल्समाथि ७ विकेटको जित निकालेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्...
काठमाडौँ । गोदावरी नगरपालिका-३ मा गोदावरी वडा अध्यक्ष कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। वडा कार्यालयको सहयोग र बहुमुखी कला मन्दिरको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता कार्तिक १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म चल्ने छ। ‘हरेक वर्ष वार्षिकोत्सवमा स्थानीय स्तरमा गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रम बिस्तार गर्दै...
एकदिवसीयमा ओमानमाथि नेपालको पहिलो जित
काठमाडौँ । एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले ओमानविरुद्ध पहिलो जित निकालेको छ। ओमानविरुद्ध पहिलो जित निकाल्ने क्रममा नेपाल विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको दोस्रो क्रिकोणात्मक सिरिजको अन्तिम खेलमा ७ विकेटले विजयी भयो । नेपाललाई जित दिलाउन करण केसी र सन्दीप लामिछाने बलिङमा र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ले ब्याटिङमा ...
सी डिभिजनको छनौट तालिका सार्वजनिक
काठमाडौँ । सहिद स्मारक 'सी' डिभिजनको छनौट खेलका लागि एन्फाले खेलतलिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रम गर्दै छनोट तालिका (ड्र) सार्वजनिक गरेको हो। एन्फाले छनौटका लागि खुला आह्वान गरेपछि देशभरका ७८ क्लबले छनौटका लागि दर्ता गराएका छन्। छनौटका लागि क्लब...
अर्जेन्टिनाले जित्ला कोपा अमेरिका ?
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको ४७औं संस्करण आइतबार बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना भीडेसँगै सकिने छ। धेरैले यो फाइनललाई ‘ड्रिम फाइनल’ भनेका छन्। ब्राजिल र अर्जेन्टिना विश्व फुटबलका महाराथी हुन् । त्यसैले यी दुईबीचको भीडन्तलाई ‘ड्रिम फाइनल’का रुपमा...
काठमाडौँ । इंग्ल्यान्ड युरो २०२० को उपाधि नजिक पुगेको छ। बिहीबार विहान सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा डेनमार्कलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड ५५ वर्षपछि मुख्य प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित समयको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि ३० मिनेटको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै इंग्ल्यान्डले...
डेनमार्क २९ वर्षपछि युरोपियन च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा, चेक रिपब्लिक बाहिरियो
काठमाडौं । क्‍वार्टरफाइनलमा चेक रिपब्लिकलाई २-१ गोलको नतिजामा पराजित गर्दै डेनमार्क युरो २०२० को सेमिफाइनलमा पुगेको छ । निबार राति अजरबैजानको बाकुमा भएको खेलमा सहज जित निकाल्दै डेनमार्क १९९२ पछि पहिलो पटक युरोपियन च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो । डेनमार्कले खेलको पाँचौँ मिनेटमा थोमस डेलान...
युक्रेनमाथि सानदार जित निकाल्दै इंग्ल्यान्ड २५ वर्षपछि अन्तिम चारमा
काठमाडौँ । इंग्ल्यान्ड युरो २०२० को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार विहान सम्पन्न अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेलमा युक्रेनलाई ४-० गोलले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड २५ वर्षपछि युरो कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेलको चौथो मिनेटमै इंग्ल्यान्डले अग्रता लिएको थियो। कप्तान ह्यारी केनले रहिम स्टर्लिङले...
स्वीडेनलाई हराउँदै युक्रेन क्‍वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । अन्तिम-१६ अन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा स्वीडेनमाथि २-१ गोलको नतिजामा जित निकाल्दै युरो २०२० को क्‍वार्टरफाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार राति स्कटल्यान्डमा भएको खेलमा स्वीडेनलाई जित दिलाउन ओलेकसान्डर जिन्चेन्को र आर्टेम डोब्याकले एक/एक गोल गरे । यस्तै, स्वीडेनका लागि एमिल फोर्सबर्...
युरोकप २०२०: फ्रान्स बाहिरियो, स्विट्जरल्यान्ड क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौँ । विश्व विजेता फ्रान्स युरो कपको अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको छ। सोमबार राति भएको खेलमा स्विटरल्यान्डसँग पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ ले पराजित हुँदै फ्रान्स अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको हो। फ्रान्स बाहिरिएसँगै अघिल्लो सिजनका दुवै फाइनलिस्ट नकआउट चरणबाटै बाहिरिएका छन्। आइतबार राति डिफेन्डिङ च्याम्पिय...
युरो कप–२०२०: नकआउट चरणमा पुगे यी टिम, कसले कोसँग खेल्दैछन् ?
काठमाडौँ । युरो २०२० को समूह चरणको खेल सकिएका छन्। समूह चरणका खेल सकिएसँगै अन्तिम १६ मा पुग्ने टिमहरूको टुंगो लागेको छ। अन्तिम १६ मा ६ समूहका विजेता र उपविजेता गरी १२ टिम पुगे। यस्तै ६ समूहमा तेस्रो हुने ४ टिमले पनि अन्तिम १६ मा स्थान पाए। तेस्रो भएका ६ टिम मध्ये उत्कृष्ट ४ टिमले अन्तिम १६ मा...
अष्ट्रिया पहिलो पटक युरो कपको नकआउट चरणमा
काठमाडौं । अस्ट्रिया युरो कप फुटबलको नकआट चरणमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार राति रोमानियाको बुकारेस्टमा भएको खेलमा युक्रेनलाई १–० ले हराउँदै अस्ट्रिया नकआउट चरण पुगेको हो। अस्ट्रियाले समूह सीमा २ जितसहति ६ अंक जोडेको छ। त्यस्तै, पराजित भएको युक्रेनको पनि तेस्रो स्थानको उत्कृष्ट चारभित्र रहँदै नकआउट च...
काठमाडौँ । युरोकप २०२० को समूह चरण अन्तर्गत समूह ‘ए’को अन्तिम खेलमा वेल्स इटालिसँग पराजित भएको छ। पराजय बेहोरे पनि वेल्स अन्तिम १६ मा स्थान बनाउन भने सफल भयो। अन्तिम खेलमा समूह विजेता इटालिको सामना गरेको वेल्स १–० ले पराजित भएको हो। खेलको एकमात्र गोल मेटिओ पेसिनाले ३९औं मिनेटमा गरेका थिए। ३ खेलम...
युरोकप २०२० : साविक विजेता पोर्चुगल जर्मनीसँग ४-२ ले पराजित
काठमाडौं । फ्रान्सविरुद्धको हारसँगै युरो २०२० को सुरुआत गरेको जर्मनीले समूह ‘एफ’को आफ्नो दोस्रो खेलमा पोर्चुगललाई ४-२ गोलको नतिजामा पराजित गरेको छ । पोर्चुगल साविक विजेता समेत हो । शनिबार राति जर्मनीको घरेलु मैदान एलिनाज एरिनामा भएको खेलको सुरुआतमा ०-१ को नतिजामा पछिपरेको जर्मनीले लगातार चार गोल ...
युरोकप २०२०: फ्रान्स र हंगेरीले खेले बराबरी
काठमाडाैं । १६औं संस्करणको युरोकपमा फ्रान्स र हंगेरीले बराबरीमा रोकिएको छ । शनिबार साँझ पुडापेस्टस्थित फ्रांक पुस्कास स्टेडियममा भएको खेलमा फ्रान्स र हंगेरीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा अग्रता पनि घरेलु टोली हंगेरीले नै लियो । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अतिला फिओलाले गोल गरेको थियो । उनले...
अन्तिम १६ मा बेल्जियम , डेनमार्क २–१ ले पराजित
काठमाडौँ । बेल्जियम १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। कोपनहेगनस्थित पार्केन स्टेडियममा सम्पन्न समूह बी अन्तर्गत उपाधि दावेदार बेल्जियमले डेनमार्कलाई २-१ गोल अन्तरमा हराउँदै लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। बेल्जियमलाई जिताउन थोर्गन हाजार्ड र के...
इटालीको दोश्रो जित: स्वीटजरल्याण्ड ३-० ले पराजित
काठमाडौँ । युरो २०२० मा इटाली लगातार दोस्रो खेलमा विजयी भएको छ। इटालीले बिहीबार विहान सकिएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डलाई ३-० गोलले पराजित गरेको हो। इटालीको जितमा लोकाटेलीले दुई गोल गर्दा इमोबिलले एक गोल थपे। लोकाटेलीले २६ र ५२ मिनेटमा गोल गरेका थिए। इमोबिलले ८९ मिनेटमा तेस्रो गोल गरे। इटाल...
युरोकप: जर्मनीको आत्मघाति गोलले फ्रान्स १–० ले विजयी
काठमाडौँ । युरोकपको समूह एफ अन्तर्गत गए राति भएको अर्को खेलमा फ्रान्सले जर्मनीलाई हराएको छ । जर्मनीको एलिनाज एरिनामा भएको खेलमा आत्मघाती गोल उपहार पाएको फ्रान्सले जर्मनीलाई १–० गोलले हरायो । खेलको २० औं मिनेट जर्मनीका डिफेन्डर म्याट्स हमल्सले गरेको आत्मघाती गोल नै फ्रान्सको जितको लागि पर्य...